Foomka Tabaruca - Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie
Deeqaha la siinayo Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie cashuur ma laga jari karaa?
Haa, tabarucaadu waa cashuur dhimis; Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie waa hay'ad samafal ah oo hoos timaada Xeerka Dakhliga Gudaha qaybta 501 (c) (3).
Ma sameyn karaa tabarucaad si aan u taageero xafiiska xafiiskayga PSLS?
Markay suurtagal tahay, Gobolka Prairie wuxuu ku deeqayaa tabaruca xafiiska adeegga maxalliga ah ee bulshada meesha ay tabarucaadu ka soo jeedo. Waxaad ku wareejin kartaa hadiyadaada xafiis ka baxsan bulshadaada adoo tilmaamaya xafiiska aad dooratay.
Sidee deeqaha loo aqoonsadaa?
Dhammaan deeqaha waxaa laga aqoonsan yahay Warbixinta Sanadka. Deeqaha laga sameeyay Ololaha Adeegyada Sharciga waxaa badanaa lagu aqoonsadaa munaasabadaha Ololaha, joornaalada ururrada qareennada iyo mararka qaarkood wargeysyada maxalliga ah. Hadiyadaha waxaa lagu bixin karaa sharaf ama xusuus asxaabta, qoyska ama asxaabta. Codsiyada ah in magac lagaa dhigo ayaa sidoo kale la sharfaa.
Ma heli doonaa xaqiijin ku saabsan tabarucaadayda?
Deeq kasta waxaa lagu qirayaa warqad waxyar kadib helitaanka hadiyadda. Sannad kasta bisha Janaayo waxaan u dirnaa deeq bixiye kasta oo kooban oo ku saabsan dhammaan hadiyadaha ay bixiyeyaashu bixiyeen sanadkii hore.
Su'aalaha ku saabsan mid ka mid ah qaababkan wax bixinta, fadlan la xiriir:
Jennifer Luczkowiak, Agaasimaha Horumarinta (224) 321-5643
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie waa hay'ad samafal ah oo aan macaash doon ahayn hadiyadona canshuur ayaa laga jari karaa marka loo eego qaybta IRS 501 (c) (3). Dhammaan hadiyaduhu waxay helayaan qirasho qoran oo deeq-bixiyeyaasha ayaa laga aqoonsan yahay kaayaga Warbixinta Sanadka. Codsiyada ah in magac lagaa dhigo waa la sharfay.
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie, Inc. waxaa maalgeliyey, qayb ahaan, Shirkadda Adeegyada Sharciga (LSC). Iyada oo shuruud u ah maalgelinta ay ka hesho LSC, waa laga xaddiday inay ku lug yeelato waxqabadyada qaarkood dhammaan shaqadeeda sharciga - oo ay ku jirto shaqada ay taageerto ilaha kale ee maalgelinta. Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie, Inc. wax kharash ah kuma bixin karaan waxqabad kasta oo uu mamnuucayo Sharciga Shirkadda Adeegyada Sharciga, 42 USC 2996, iyo. seq., ama Sharciga Dadweynaha 104-134, §504 (a). Sharciga Dadweynaha 104-134 §504 (d) wuxuu u baahan yahay in ogeysiiska xaddidan la siiyo dhammaan maalgeliyeyaasha barnaamijyada ay maalgeliso Hay'adaha Adeegyada Sharciga. Fadlan kala xiriir Xafiiskayaga Maamulka ee (815) 965-2134 wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira mamnuucidan.
Waxaan ku hanweynahay in aan ka mid noqono Shabakadda Kaalmada Sharci ee Ciidamada Qalabka Sida ee Illinois (IL-AFLAN), taas oo bixisa kaalmo sharci oo aan wax lacag ah laga qaadin xubnaha dakhligoodu hooseeyo ee ciidamada qalabka sida, mujaahidiinta, iyo qoysaskooda. Booqo bit.ly/3s0Fljf si aad wax badan uga barato shabakadan cajiibka ah ee ururada.	... Arag in dheeraad ahEeg Khariidad